Manapaka ny servisim-pinday ho an’ny Rohingya i Bangladesh · Global Voices teny Malagasy
hanempotra ny herisetra voarindra amin'ny antso finday ao an-toby
Voadika ny 06 Septambra 2019 5:12 GMT
Fiainana ao amin'ny toby Rohingya ao amin'ny Cox's Bazar. Saripika hita ao amin'ny Flickr avy amin'i Mohammad Tauheed. CC BY-NC 2.0.
Taorian'ny hetsi-panoherana tamin'ny 25 Aogositra, tsingerintaona faharoa amin'izay lazain'ny Rohingya maro hoe ‘Androm-pandripahana’—andro nandosiran'ny Rohingya an'arivony an'i Myanmar ho any Bangladesh taorian'ny famoretana henjana nataon'ny tafika mitam-piadian'i Myanmar tamin'ny taona 2017—nanome baiko ny orinasam-pifandraisandavitra ao aminy ny governemanta Bangladeshita hanapaka ny fidirana finday any amin'ny toby Rohingya amin'ny lazaina ho ‘fiarovam-pirenena.’
Notononin'ny governemanta ny andian-keloka bevava ao an-toby tao anatin'ny herinandro vitsivitsy izay voalaza fa voalamina tamin'ny alalan'ny fampiasana finday.
Nomena toromarika maika ny mpandraharahan'ny finday rehetra hiantohana fa tsy hisy karatra SIM sy fanamoràna rehetra momba ny finday amidy any amin'ny toby Rohingya ao anatin'ny fito andro iasana. BTRC
Nomena baiko ny Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (BTRC na ny Vaomieram-Pandrindrana ny Fifandraisandavitra ao Bangladesh) hanamarina ao anatin'ny fito andro iasana ireo manana finday any an-toby, izay voatatitra fa ahitana fifandraisana am-pinday 9000 miasa mahazatra, amin'ny fanamarinana ny anarana sy adiresy miasa mba hanoratana ny karatra SIM tsirairay. Notakiana ihany koa ny fandraharahana fifandraisandavitra hanakenda, na hampalemy ny tambajotran-dry zareo any amin'ny sisintany ifanolorana amin'i Myanmar, ary hanapaka tanteraka izany any amin'ny toby Rohingya, ary hanakona ny fivarotana vokatra finday amin'ny Rohingya mpitsoa-ponenana.
Ho fanakanana ny Rohingya mpitsoa-ponenana tsy hampiasa finday, nanapa-kevitra hampitsahatra fivarotana karatra SIM any amin'ny upazilas ao Ukhia sy ao Teknaf any Cox’s Bazar ny BTRC sy ireo mpivarotra mandra-pisian'ny filazana manaraka. Nanapa-kevitra ihany koa ry zareo hampiato ny tolotra 3G sy 4G any amin'ny upazilas manomboka amin'ny dimy hariva ka hatramin'ny dimy maraina isan'andro.
Lasa lavitra tokoa ny fiantraikan'ny fandrarana ary niteraka voka-dratsy ho an'ny Rohingya. Mpitarika Rohingya iray voatsongan'ny Asian Correspondent no nilaza fa “niantraika lalina tamin'ny fiainan'ny Rohingya [ny fandraràna], nanapahana ny fifandraisana teo amin'ireo toby isankarazany mieli-patrana manerana ny sisantanin'i Cox’s Bazar.” Nomarihan'ny mpitarika ihany koa ny fiantraikany ratsy amin'ny fandrarana eo amin'ny resaka ara-bolan'ny Rohingyas maro izay miankina amin'ny vola alefan'ny fianakaviana avy any amin'ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao.
Tsy ny Rohingya ihany anefa no iharan'ny fanakanana tolotra finday iorenan'ny tobin'ny Rohingya, antsoina hoe Cox’s Bazar, tratra ihany koa ireo mpanao fanampiana mahaolona, mponina hafa ao amin'ny distrika, ary ireo te-hifandray amin'ny olona ao an-toby.
Tamin'ny taona 2017, nandrara ireo orinasam-pifandraisandavitra ny governemanta Bangladeshita tsy hivarotra karatra SIM mihitsy amin'ny Rohingya. Tamin'izany fotoana izany ny fandraràna notsikerain'ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona tahaka ny Freedom House, izay nilaza fa “atahorana hampitatao raho-mainty amin'ilay vondrom-piarahamonina mpitsoa-ponenana tsy hahazo vaovao sy teknolojian'ny fifandraisana izay mety hahazoan-dry zareo tolotra ao Bangladesh sy ifandraisana amin'ny fianakaviana ny tsy fahazoana miditra aterineto.” Nametraka tranolain-telefonina hampiasain'ny mpitsoa-ponenana maimaimpoana ny governemantan'i Bangladesh, saingy zara raha ampiasain'ny olona izany. Milaza ny gazety Bangladeshita fa mbola nanome tolotra finday ho an'ny Rohingya ny orinasam-pifandraisandavitra sasantsasany na dia teo aza ny fandraràna.
Toby manao an-tanantohatra amin'ny toby Rohingya ao Cox's Bazar. Saripika tao amin'ny Flickr avy amin'i Mohammad Tauheed. CC BY-NC 2.0.
Ny fanapahan-kevitra tamin'ity herinandro ity hanapaka tanteraka ny finday dia mifanohitra indrindra amin'ny fomba fifanampiana mahaolona efa be mpankatoa manao hoe ‘communication is aid’ [fanampiana izany fifandraisana izany], izay manaiky fa afa-manamaivana ny fangirifiriana ny fampitana sy ny vaovao ary afa-manavotra ireo tratran'ny krizy mba ahafahana mampihatra hevitra tsy an-jambany. Nomelohin'ny vondrona mpandala ny zon'olombelona amin'ny ankapobeny izay mihevitra ny fahazoam-baovao ho zon'olombelona fototra izany manapaka aterineto na finday izany, amin'ny fanononana fiantraikany ratsy amin'ny famaliana vonjitaitra, fihariana ary amin'ny vahoaka.
Tamin'ny taona 2017 ihany koa ny governemanta Bangladeshita namindra ny fandraràna fivarotana karatra SIM ho an'ny olompirenena Bangladeshita tsy manana karapanondrom-pirenena, ary nanomboka nitaky lahatahiry biometrika avy amin'izay rehetra mividy karatra SIM, noho ny lazaina ho ‘fiarovam-pirenena.’
Tatitra vitsivitsy no nilaza fa nomanina tamin'ny alalan'ny antso am-pinday ny fihetsiketsehana tamin'ny 25 aogositra, koa heverina ho fiezahana hanemporana izay hetsi-panoherana hoavy ny fanapahan-kevitra hanapaka ny tolotra [servisy] finday.
Noraisina ihany koa izao fanatanterahan-kevitra izao ao anatin'ny fikasana faharoa tsy nahomby hampody ireo Rohingya ho any Myanmar, fa tsy nisy tao amin'ny vondrom-piarahamonina Rohyingya mialokaloka hanaiky izany.
Nitombo ihany koa ny tatitra fisian'ny herisetra tao anatin'ny herinandro vitsivitsy, izay ahitana tatitry ny polisy fa mpialokaloka fahaefatra izay no nisy nitifitra tamin'ny alahady.